အတူလက်တွဲဖို့ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေထဲကနေ နှုတ်မဆက်ဘဲ ရုတ်တရက်ထွက်ခွာသွားရသူ ဒေါက်တာမလေး ပန်ဂျာ - Cele Platform
2011 ခုနှစ် Final part1 ကြို့ပင်ကောက် ကို Field Training ထွက်ရတယ်.. မှတ်မှတ်ရရ February လကပေါ့.. ကျွန်နော်လဲ ဘယ် group နဲ့ join ရမလဲ မသိတော့, ၉ တန်း ၁၀ တန်းထဲက ခင်ခဲ့ တွဲခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း ရဲလင်း ကသူ့ group ကိုခေါ်တယ်..မိန်းခလေး ၅ ယောက်ပါတယ်တဲ့ ..ယောင်္ကျားလေး ၉ ယောက်, ပဲရှိသေးတယ် လိုက်ခဲ့လို့ ရတယ်ဆိုတော့, ကျွန်နော် လိုက်ဖစ်ခဲ့တယ်..
တစ်ခါမှ လဲ မတွေ့ဖူးတဲ့ မိန်ခလေး အဖွဲ့နဲ့ဆိုတော့ စကားလဲ သိပ်မပြောဖြစ်ကြဘူး.. ကျွန်နော်ကိုဆိုနောက်ဆုံးမှ လာ join လို့ ကောင်မလေးတွေက နှစ်ကျ အကိုကြီးလားမသိဘူး လို့တောင်မေးသေးတယ်(ပန်ဂျာလဲပါတယ်).ပြန်တွေးတွေးပီးပြုံးမိတယ်.
ရည်းစားစဖြစ်တော့ ကျွန်နော့်ကို တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ နေ့မှာ မောင်က လွဲပီး ဘယ်သူ့ကိုမှ မချစ်တော့ဘူးတဲ့, မောင်နဲ့ မယူဖြစ်ရင်တောင် သဲ တယောက်ထဲ နေသွားမယ်ဆိုပီး ကတိတွေ အထပ်ထပ်ပေးသွားတယ်..ကျောင်း သွား ဆေးရုံပြန်, စားအတူ သွားအတူ, မိုးရေထဲလဲ ၃၈ bus ကား ကြပ်ကြပ်ညပ်ညပ်တိုးစီး, ၂ယောက်ပေါင်းလို့ လက်ထဲ ပိုက်ဆံ ၁၀၀၀ ကျန်, သုံးစရာမရှိတော့တောင် အတူတူ ရယ်ပီး ပျော်ခဲ့ကြဖူးတယ်..ညတိုင်း ဖုန်းတွေ ဆက်, ကျွန်နော်ကြီးပဲ ဆက်ရတာမဟုတ်ပါဘူး, သူဘက်ကလဲ ဆက်တယ်, အဲ့တုန်းက MPT ဖဲရှိတယ်ဆိုတော့ ၁လ ဖုန်းဘေလ် ဖိုးက
၄၀၀၀၀-၅၀၀၀၀ ကြားထဲမှာရှိတယ်. သူဆို ၂၅၀၀၀ လောက်လတိုင်းကုန်တယ်.. အိမ်ကတောက် ဖုန်းပြန်သိမ်းမယ်လုပ်လို့, ဖုန်းမဆက်တော့ပဲ. စမ်းချောင်းကို အိမ်ဦးနဲ့ ကြမ်းပြင်ဆိုသလို ည၇နာရီ သူ့ကိုသွားတွေ့ ၈နာရီဆို အိမ်ပြန်စာကျက်, အားရင် အားသလို သွားတွေ့ဖြစ်တယ်.
ကားပေါ်ထိုင်တာတောင် နောက်ဆုံးတန်း ဘယ်ဘက်မှာ ပန်ဂျာ ထိုင်တယ်, ညာဘက်မှာ မအေးမြတ် ထိုင်တယ်..
ကံကို ဆိုးရှာပါတယ်, လူရွေးခေါ်တယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ်, single ၃ယောက် ကိုပဲ ရွေးခေါ်သွားခဲ့တယ်.. ကျန်ခဲ့တဲ့ ၃ယောက်က အိမ်ထောင်သည် တချိူ့ဆိုခလေး တွေရှိကြတယ်တဲ့..